Usakulwela ukuyogijima kuma-Olympics uSemenya - Impempe
Usakulwela ukuyogijima kuma-Olympics uSemenya
Umsubathi wakuleli, uCaster Semenya
Usanethemba lokuthi uzobuyela maduze ekugijimeni ezingeni lomhlaba nasemincintiswaneni yamazwe ngamazwe uCaster Semenya njengoba eselufake kwi-European Court udaba lwakhe lokulwela isithunzi, ukulingana namalungelo abesifazane kwezemidlalo.
USemenya ufuna i-European Court ivumelane naye ekutheni iSwitzerland yehlulekile ukumvikela ngesikhathi kuthikanyezwa amalungelo akhe ngaphansi kwesigaba se-Europen Convenirion on Human Rights nokungumphumela wokukhishwa inyumbazane nokuvimbela abesifazane abathile ekutheni bangenele imijaho yabesifazane.
Esitatimendeni esikhishwe ngabameli bakhe, uSemenya uthi: “Ngethemba ukuthi i-European Court izokunqanda lokhu kuthikanyezwa kwamalungelo okwenziwa yiWorld Athletics kubasubathi besifazane.
“Esikucelayo kunye nje vo, ukuvunyelwa ukuba sigijime ngokukhululeka singabesifazane abaqinile futhi abangesabi lutho esazalwa siyibo.”
Ngonyaka odlule, iSwiss Federal Supreme Court yakhipha isinqumo sokuthi imigomo yeWorld Athletics ithikameza ilungelo likaSememya ngokwesiqu sakhe kodwa yenqaba ukungenelela ukuvikela amalungelo akhe.
Ithimba labameli bakaSemenya lizofaka izethulo zokuthi i-European Court of Human Rights kumele yenze okuthile ngalokhu kuthikanyezwa kwamalungelo okubandakanya nabanye abasubathi besifazane, bese iqinisekisa ukuthi bayavikeleka.
Ngasekuqaleni kweviki, ikomidi elibhekelele ezeMidlalo, ubuCiko namaSiko libe nomhlangano lapho lithole nombiko ngokulungela kweNingizimu Afrika ukuya kuma-Olympics ahlelelwe ukuqala ngoJulayi 23.
Leli komidi lithole izethulo kumegameli we-Athletics South Africa (ASA), u-Aleck Skhosana, othe uSemenya akafakangwa esikwatini seNingizimu Afrika ngenxa yokuthi udaba lwakhe lusesenkantolo.
Nokho ikomidi liphinde lakuveza ukweseka kwalo uSemenya, lithi imithetho ayilungile futhi likhathazekile ngokuthi lokhu sekuphazamise ukuzilungiselela kwakhe. -Udaba luthathwe kuGSport for Girls
Previous Previous post: Lizoqulwa ngoMeyi icala locansi likaMicho
Next Next post: Kuzokwenza umehluko nakwiligi ukudlala kahle kweChiefs kwiChampions League